राति अबेर वार्ताटोली आमने–सामने, निष्कर्ष निस्किएन | Nagarik News - Nepal Republic Media
अनशनको २७ औं दिन
२४ आश्विन २०७७ ४ मिनेट पाठ
चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि १९औं पटक अनशन बसेका चिकित्सक गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका लागि निकास खोज्न शुक्रबार राति दुवै पक्षका टोली शिक्षा मन्त्रालयमा वार्तामा बसेका छन् । यसअघि बिहीबार दुई चरणमा भएका औपचारिक वार्तामा निकास निस्किन नसकेपछि बृहत् गृहकार्यसहित शुक्रबार फेरि छलफलमा बस्ने सहमति भएको थियो । दिनभर आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको भनिएका दुवै टोली राति वार्तामा बसेका हुन् । वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढेको बताइए पनि निष्कर्षमा भने पुगेन ।
विभिन्न माग राखेर केसी आमरण अनशन बसेको शुक्रबार २६ दिन पुगेको छ । अनशनका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ । केसीका माग सम्बोधन र उनको जीवन रक्षा गर्न चारैतिरबाट दबाब परेपछि सरकारले अनशनको २४औं दिन बुधबार वार्ताटोली बनाएको थियो । सोही दिन केसी पक्षबाट पनि वार्ताटोली घोषणा गरिएको थियो ।
केसीतर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका डा. लोचन कार्कीले माग सम्बोधनका लागि सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी रहेको जानकारी दिँदै केही नीतिगत र कानुनी विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । स्रोतका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा वरिष्ठता मिचेर डिन नियुक्त गरिएको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी वार्ताटोली प्रस्ट हुन सकेको छैन । आइओएम लगायतमा कनिष्ठलाई हटाएर वरिष्ठलाई पदाधिकारी बनाउन सरकारी टोली सहमत भए सहमति टाढा नभएको स्रोतले बतायो । त्रिवि र यस मातहतका निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्ने केसीको यही मागमा सहमति जुटाउने विषयमा छलफल बढी केन्द्रित छ ।
केसीका विभिन्न मागमध्ये एउटा आइओएमको डिनमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै अन्य पदमा पनि वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यही मागका विषयमा कुरा अड्किएको सरकारी वार्ताटोलीका एक सदस्यले बताए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने तर उनीहरूले समय दिन नसक्दा टुंगोमा पुग्न नसकेको ती सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चाहे तत्काल सहमतिमा पुग्न सकिने अवस्था छ ।
केसीको वार्ता टोलीका सदस्य डा. कार्कीले संस्थानमा डिन नियुक्तिको विषय र विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड बनाउने विषय अलि पेचिलो बनेको बताए । यही विषयमा सरकारी पक्ष प्रस्ट हुन नसक्दा सहमतिमा पुग्न नसकेको देखिन्छ । केसीले यो माग पहिलो अनशनदेखि उठाउँदै आएका छन् ।
विगतका सरकारले पटकपटक वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने सम्झौता गरे पनि ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गर्दै कनिष्ठ डा. दिव्यासिंह शाहलाई डिन बनाएको छ । विगतमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने केसीको मागमा शाहको पनि समर्थन थियो ।
केसीको संघर्षकै कारण वरिष्ठताका आधारमा संस्थानमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेको थियो तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा कनिष्ठ चिकित्सक शाहलाई डिन बनाइएको छ । शाह ओलीकी निजी चिकित्सक पनि हुन् ।
त्यस्तै विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीको मागमा सरकारी वार्ताटोलीबाट पोजिसन प्रस्ट नहुँदा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको वार्ता टोलीका सदस्यको भनाइ छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु-याएर एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मागमा पनि लगभग सहमति जुटिसकेको छ । त्यस्तै गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी पठनपाठन सुरू गर्ने, प्रदेश दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने मागमा दुवै पक्ष सहमतजस्तै देखिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गर्नुपर्ने मागमा पनि सहमति जुट्ने अवस्था देखिएको छ । बयलपाटा अस्पताललाई सञ्चालन गरी निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्ने माग पनि दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ ।
सरकारले विगतमा आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको भन्दै केसी भदौ २९ देखि अनशनमा छन् । जुम्लाबाट अनशन थालेका उनी अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ । सरकारले अनशनको २४ दिनमा डा. केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा गुणराज लोहनी र दिलीप शर्मा सदस्य रहेको टोली बनाएको हो । सोही दिन केसी पक्षबाट पनि वार्ता टोली बनाइएको हो । केसी पक्षको वार्ताटोली संयोजक डा. जीवन क्षेत्री छन् । उनको टोलीका सदस्यमा डा. कार्की, डा. अन्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल छन् ।
अनशन लम्बिँदै गएपछि त्यसको असर डा. केसीको स्वास्थ्यमा परेको छ । उनलाई अहिले सास फेर्न समस्या पर्न थालेको छ । सहयोगी तोसिमा कार्कीका अनुसार सास फर्न समस्या भएपछि केसीलाई अक्सिजनको मात्रा बढाउनुपरेको छ । अक्सिजनको सपोर्टमा उनको उपचार भइरहेको कार्कीको भनाइ छ । उनको रक्तचापसमेत निकै घटेको छ । जिउ गल्ने, चक्कर लाग्ने, मुटुको धड्कन बढ्नेलगायतका समस्या पनि उनमा देखिएका छन् । डब्लुबिसी, सुगर र पोटासियमलगायतका तत्वको मात्रा पनि घट्दै गएको छ । उनलाई कुनै बेला पनि भेन्टिलेटर आवश्यक पर्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन् ।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०७७ ०६:३४ शनिबार
डा. गोविन्द केसी १९औं अनशन वार्ताटोली आमने–सामने